Xiisada dagaal oo ka taagan Koonfurta Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Xiisada dagaal oo ka taagan Koonfurta Mudug
Galmudug ayaa sheegtay inay u diyaargarowday dib ula wareegista Degaanka Bacaadweyne, oo dhawaan Al-Shabaab la wareegtay.
GAALKACYO, Soomaaliya - Maamulka Galmudug ayaa Ciidamo aad u hubeysan geeyay Maanta degaanno ku yaalla Koonfurta Mudug oo Wasil ay kamid tahay, halkaasoo Al-Shabaab mudooyinkii dambe ka wadey dhaq-dhaqaaqyo.
Wasiir iyo Saraakiil Ciidan ayaa la socday askarta Daraawiishta ee gaarey goobaha cusub ee laga cabsi qabo inay gacanta Al-Shabaab galaan, iyadoo horey Galmudug looga fara-maroojiyay degaanka Bacaadweyne.
Intii uu Qoor-Qoor ku maqnaa Muqdisho, oo ka shaqeynayay Mudo-korarsiga Farmaajo ayaa waxaa faraha ka baxay xaaladda amni ee Galmudug, iyadoo lagala wareegay dhowr degaan oo Al-Shabaab gacanteeda galay, kuwaasoo ay adag tahay in markale si fudud looga xoreeyo.
Wararka ayaa sheegaya in gulufka socda ay Puntland qeyb ka tahay, iyadoo usoo dirayso Ciidankeeda gaar ah si ay uga qeyb galaan dagaalka Al-Shabaab looga saarayo Bacaadweyne, oo muhiim u ah amniga Mudug.
Tan iyo markii Mareykanka ka joojiyay duqeymaha, Al-Shabaab ayaa billowday inay dhaqaaqdo oo la wareegto degaanno, iyadoo howlgalkeeda u wareejisay dhanka gobollada Dhexe iyo Puntland.